China Silicone Cable Winders ifektri abakhiqizi | SJJ
Ingabe unenkinga ngezintambo zakho zezingcingo, izintambo zikagesi, nezinye izesekeli zemigqa? Siphakamisa ukuthi kusetshenziswe izinto ezikahle izinsimbi zekhebula le-silicone ukuzenza zicoceke futhi zihleleke. Amawinders ekhebula abicah ayi-eco-friendly futhi awanabo ubuthi, athambile futhi abushelelezi enziwa nge-diff ...
Ingabe unenkinga ngezintambo zakho zezingcingo, izintambo zikagesi, nezinye izesekeli zemigqa? Siphakamisa ukuthi kusetshenziswe izinto ezikahle izinsimbi zekhebula le-silicone ukuzenza zicoceke futhi zihleleke. Amawinders ekhebula abicah a-eco-friendly futhi awanabo ubuthi, athambile futhi abushelelezi enziwa ngezimo ezihlukile, aphethe izintambo ngokuphelele.
Izipho Ezihle Ezicwebezelayo zakhipha ubujamo obuklanyelwe, isikhunta simahhala kule miklamo ekhona. Ithimba lethu lobuchwepheshe lobuchwepheshe liyakwazi ukwenza ubujamo nemiklamo ngokuya ngezidingo zakho, futhi izonikeza iziphakamiso eziningi ngemininingwane. Ngakolunye uhlangothi, ama-logo ashicilelwe noma anemibala agcwaliswe kuma-silicone cable winders angenziwa ngezifiso ukukhangisa noma yimaphi amaphrojekthi ngokusho kwezicelo zamakhasimende. Amawinders ekhebula le-silicone awawona amathuluzi wokucoceka indawo osebenzela kuyo kuphela, kepha futhi neziteshi ezinhle kakhulu zokuveza imibono noma imiqondo yakho.
Izinto zokwakha: Abicah nabanye
Imiklamo nosayizi: Isikhunta samahhala semiklamo yethu ekhona, imiklamo eyenziwe ngezifiso
Amalogo: Amalogo angabhalwa, afakwe embossed noma alahlwe ngombala ogcwele
Ukupakisha: 1 pc / poly bag, noma landela imiyalo yakho
MOQ: ama-200 ama-PC
Langaphambilini Abaphathi bekhadi le-Silicone
Olandelayo: Amabhande Abicah
Imfashini Yezokuphepha ye-LED ekhombisa ukhiye
Izikhiye Zama-Resin Ezenziwe Ngesandla